Dopamine သည် Cue မှီခိုသောကြောက်ရွံ့မှုအခြေအနေ (2009) - Brain On Your Brain အတွက်လိုအပ်သည်
Dopamine Cue မှီခိုကြောက်လန့်အခြေအနေ (2009) အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်
ယောနသန်သည် P. Fadok, 1,2 Tavis MK Dickerson,2နဲ့ Richard ဃ Palmiter2 *
J ကို neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2010 မတ်လ9အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
J ကို neuroscience ။ 2009 စက်တင်ဘာလ 9; 29 (36): 11089-11097 ။
Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1616-09.2009 ။
Neurobiology နှင့်အပြုအမူများတွင် 1 ဘွဲ့လွန်အစီအစဉ်ဝါရှင်တန်, ဆီယက်တဲလ်တက္ကသိုလ်, WA 98195
ဇီဝဓါတုဗေဒ2ဦးစီးဌာနနှင့် Howard Hughes ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်စတီကျု, ဝါရှင်တန်ရှိ Seattle တက္ကသိုလ်, WA, 98195
ရစ်ချတ်ဃ Palmiter, ဇီဝဓါတုဗေဒ HHMI နှင့်ဦးစီးဌာန, Box ကို 357370 ဝါရှင်တန်, ဆီယက်တဲလ်တက္ကသိုလ်, WA 98195: * ပေးစာယူမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးကို J Neurosci တွင်အခမဲ့ရနိုင်သည်
အဆိုပါထုတ်ဝေဆောင်းပါးကိုးကားကြောင်း PMC တခြားဆောင်းပါးတွေကိုကြည့်ပါ။
Dopamine (DA) မော်တာ function ကို, သိမှတ်ခံစားမှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အပါအဝင်အများအပြားအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်, သို့သော်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကို equivocal နေဆဲဖြစ်သည်။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်-related သင်ယူမှုအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆနျးစစျဖို့, dopamine-လစ်လပ် (DD) ကြွက်တစ်ဦးကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ပါရာဒိုင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ DA ပေါင်းစပ် 3-dihydroxy-L-phenylalanine (L-Dopa),4၏အုပ်ချုပ်မှုမှတဆင့် DD ကြွက်တွေမှာပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ, အားဖြင့်သော်လည်းကောင်းတစ်ဦး DA-ကုန်ခမ်းသို့မဟုတ် -replete ပြည်နယ်အတွက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အကဲဖြတ်ခွင့်ပြု။ ကြောက်လန့်-potentiated ထိတ်လန့် DD ကြွက်တွေမှာပျက်ကွက်ခဲ့ပေမယ့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အောက်ပါချက်ချင်း L-Dopa အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပွနျလညျထူထောငျနိုငျသညျ။ အဆိုပါ basolateral amygdala မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံမှ DD ကြွက်နှင့် DA ပေါင်းစပ်၏ပွနျလညျထူထောငျအတွက်သင်ယူမှုအတွက် ventral tegmental ဧရိယာအပြည့်အဝပွနျလညျထူထောငျကွောကျရှံ့သောအတွင်း DA ပေါင်းစပ်၏ရွေးချယ်ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ပွနျလညျထူထောငျရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ပွနျလညျထူထောငျ, ဒါပေမယ့်မပေးရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်စျေးမှာာင်း။ ကျနော်တို့ကိုလည်း DA D1 အဲဒီ receptor (D1R) နှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors သင်ယူခြင်း cue-မှီခိုကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အလိုအပျသညျ့ဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် DA မျိုးစုံပစ်မှတ်ဒေသများအတွင်းမျိုးစုံအဲဒီ receptor Subtype အပေါ်သရုပ်ဆောင်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်၏တည်ငြိမ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
keywords: Dopamine, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်, amygdala, dopamine D1 အဲဒီ receptor, dopamine D2 အဲဒီ receptor
အဆိုပါ neuromodulator DA ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူ (Schultz, 2002; ပညာရှိ, 2004) အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်တယ်, သက်သေအထောက်အထားစုဆောင်း DA ကြောက်-related (Lamont နှင့် Kokkinidis, 1998 သင်ယူဘို့အရေးကြီးသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု; Guarraci et al ။ , 1999; Greba နှင့် Kokkinidis, 2000; Guarraci et al, 2000; ။ Greba et al, 2001; ။ Pezze နှင့် Feldon, 2004; de Oliveira et al, 2006) ။ ။ DA ကွောကျရှံ့သောသင်ယူခြင်းများအတွက်အရေးကြီးသော limbic ဦးနှောက်ဒေသများဖို့ ventral midbrain စီမံကိန်း၏အာရုံခံ, ဤဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် DA အဆင့်ဆင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များ (Abercrombie et al စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်, 1989; ။ Kalivas နှင့် Duffy, 1995; ဒိုဟာဆီနှင့် Gratton, 1997; Inglis နှင့် Moghaddam , 1999) ။ ထို့အပြင်အချို့ midbrain DA အာရုံခံ (Guarraci နှင့် Kapp, 1999; Horvitz, 2000; ယောရှုသည် et al, 2008 ။ ) ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများတိုးမြှင့်။ ထို့အပွငျ DA (ဥပမာ hippocampus နှင့် amygdala အဖြစ်ကြောက်ရွံ့သင်ယူမှုများအတွက်အရေးပါသောဒေသများရှိ, ရေရှည်အလားအလာလွယ်ကူချောမွေ့ရန် Bissiere et al မှတ်ဉာဏ်၏အဓိကအာရုံကြော Correlate ပြသခဲ့ပြီး, 2003; ။ သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan, 2006; Swant နှင့် Wagner, 2006) ။
တိုးတက်မှုရှိနေသော်လည်းကြောက်ရွံ့ DA အာရုံခံဆဲလျဇီဝြဖစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းကို လုပ်. , ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်-related သင်ယူမှုအတွက် DA နှင့်၎င်း၏ cognate receptors ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍမဖြေရှင်းနိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။ စနစ်, ဒါမှမဟုတ် amygdala သို့ D1R တူသောရန်၏ထိုးကြောက်ရွံ့-related သင်ယူမှု၏ဝယ်ယူသို့မဟုတ်စကားရပ်ပိတ်ဆို့ဖို့ပြသခံပြီ သို့သော်အခြားသူများကဒီဆေးတွေမပါအကျိုးသက်ရောက်မှု (။ Greba နှင့် Kokkinidis, 1999; de Oliveira et al, 2000 ။ Guarraci et al, 2006) ရှိသည်ပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် D1R ကဲ့သို့ agonists မြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတစ်ခုခုကိုပြသခဲ့ကြ (Guarraci et al, 1999; ။ Greba et al, 2000; ။ Inoue et al, 2000; ။ de Oliveira et al, 2006 ။ ) ။ analog ကှာဟ D2R ကဲ့သို့ receptors များအတွက် agonists သို့မဟုတ်ရန်အသုံးချဖို့လေ့လာမှုများတှငျတှေ့ခဲ့ကြ (။ Guarraci et al, 2000; Greba et al, 2001; ။ Ponnusamy et al, 2005; ။ de Oliveira et al, 2006 ။ ) ။ ဤရွေ့ကားကှာဟမှုကြောင့်အမူအကျင့်နည်းစနစ်, ထိုး-မှီခိုထိုးသွင်းမူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ, ဒါမှမဟုတ် pharmacological အေးဂျင့်များ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သောလေ့လာမှုတွေကပိုရွေးချယ် D2 receptors antagonizing စေခြင်းငှါအနေဖြင့်ဥပမာအားဖြင့်, DA အဲဒီ receptor ရန်ဤသို့မိမိတို့၏ selection အတွက်ကျယ်ပြန့်ကွဲပြား, အခြားသူများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့် D2, D3 နှင့် D4 receptors (Missale et al ။ , 1998) antagonizing နိုင်ပါသည်။
ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်-related သင်ယူမှုအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကို elucidate မှကျနော်တို့ DA (DD ကြွက်) ချို့တဲ့ကြွက်အသုံးပြုသွားမည်, အဖြစ် D1R သို့မဟုတ် DA D2 receptors (D2R) ဖြစ်စေချို့တဲ့ကြွက်နှင့်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ပါရာဒိုင်း၌သူတို့ကိုစုံစမ်း။ ကြောက်လန့်-potentiated ထိတ်လန့်တစ်ဦးကြားနေနှိုးဆွတဲ့ footshock (ကော့ချ်, 1999) နှင့်တွဲချိတ်အောက်ပါ acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်တိုး elicits ထားတဲ့အတွက် Pavlovian-ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်ပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်လန့်-potentiated ထိတ်လန့်က hypoactive DD ကြွက် (Zhou နှင့် Palmiter, 1995) တွင်တိုင်းတာရန်ခက်ခဲသည်အရာ, အပြုအမူအေးခဲနေသောတစ်ခုအကဲဖြတ်အပေါ်မူတည်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေ့လာမှုတွေများအတွက်စံပြပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ DD ကြွက်တစ်ဦး DA-ကုန်ခမ်းသို့မဟုတ် DA-တှေအမြားကွီးပြည်နယ်ဖြစ်စေလေ့လာနိုင်ပါတယ်သောကြောင့်သူတို့သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလေ့လာရန်စံပြအခွင့်အလမ်းကိုပေး။ ထို့အပွငျ Cre recombinase ၏ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ပေးပို့သုံးပြီး DA အချက်ပြရွေးချယ် DD ကြွက်တစ် Th allele ၏ reactivity (Hnasko et al ။ , 2006) ကတိကျသောပစ်မှတ်ဒေသများပြန်နိုင်ပါတယ်။ တိကျသောပစ်မှတ်ဒေသများသို့ DA ၏ရွေးချယ်ပွနျလညျထူထောငျကွောကျရှံ့သောအေးစက်နေစဉ်အတွင်း DA အချက်ပြခြင်းဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏အကဲဖြတ်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ DD ကြွက် (Hnasko et al ။ , 2006) ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ အတိုချုပ်, DD (Thfs / fs; DbhTh / +) ကြွက်ဟာ Th ဗီဇ၏ပထမဦးဆုံး intron သို့ lox P ကိုက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့် flanked တစ် neomycin ခုခံ (NeoR) မျိုးဗီဇ၏သွင်းမှတဆင့် inactivated ခဲ့ကြရာနှစ်ခု nonfunctional tyrosine hydroxylase (Th) alleles, သယ် ။ ဤကြွက်လည်းတဦးတည်းနဂိုအတိုင်း dopamine β-hydroxylase အဆိုပါ Th ဗီဇတစ်ခုကိုပစ်မှတ်ထားသွင်းနှင့်အတူ (Dbh) allele နှင့်တဦးတည်း Dbh allele သယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များအနည်းဆုံးနဂိုအတိုင်း Th allele နှင့်တစ်နဂိုအတိုင်း Dbh allele သယ်။ Non-dopaminergic catecholamines ၏အဆင့်ဆင့်အားလုံး catecholamines ၏ DD တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အဆင့်ဆင့်အတွက်ပုံမှန်များမှာထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပုံမှန်များမှာ (Zhou နှင့် Palmiter, 1995; ။ Szczypka et al, 1999) ။ ကြွက်တစ်ဦးရောနှော C57BL /6X ကို 129 / SV မျိုးရိုးဗီဇနောက်ခံပေါ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ကြောင့်ပြင်းထန် hypophagia ရန်, DD ကြွက် 50 မှာ, L-Dopa နှင့်အတူ (ip) မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် postnatal နေ့က 33 စတင် 1995 တစ်အသံအတိုးအကျယ်μl / ဂရမ် (Zhou နှင့် Palmiter, 10) မှာ / ကီလိုဂရမ် mg နေ့စဉ်ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားထိုး 8 နာရီ (Szczypka et al ။ , 10) မှ 1999 များအတွက် DA function ကို restore ။ D1R နောက်ကောက် (KO) နှင့် D2R KO ကြွက်ဖော်ပြထားခဲ့ကြ (Drago et al, 1994; ။ ။ ကယ်လီ et al, 1997) ။ နှစ်ဦးစလုံးမျိုးကွဲတစ်ခု C57BL /6နောက်ခံပေါ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ကြောင့် D1R KO ကြွက်များတွင်တိုးတက်မှုနှုန်းဉာဏ်ရည်မမီဖို့, သူတို့ကလေးပတ်မှာနို့, ပြီးတော့တိုးတက်မှုနှုန်းမြှင့်တင်ရန်စိုစွတ်ကြ၏ Chow ကျွေးမွေးခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များ PCR ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့် genotyped ခဲ့ကြသည်။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက် 2-5 လအသက်အရွယ်အကြားအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြွက်တစ်ဦး 12 အောက်မှာသျောခဲ့ကြသည်: 12: အစားအသောက်နှင့်အတူအပူချိန်-controlled ပတ်ဝန်းကျင်တွင် (အလင်းမှောင်မိုက်) သံသရာ (5LJ5; PMI ထည့်သွင်းမှုများ, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) နှင့်ရေရရှိနိုင်သည့်ကြော်ငြာ libitum ။ အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အလငျးသံသရာကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကြွက်ကနျြးမာရေးအမျိုးသားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တက္ကသိုလ်ဝါရှင်တန်၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီအားဖြင့်သာတည်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီပြုမူဆက်ဆံခဲ့ကြသည်
အခြားအ D2 ကဲ့သို့ receptors ကွောကျရှံ့သောသင်ယူခြင်းများအတွက်အရေးကြီးပါသည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, D2R KO ကြွက်2မှာ D0.5 တူသောရန် eticlopride (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည် / ကီလိုဂရမ် (ip) MG ။ Eticlopride 0.9% ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရခြင်းနှင့်μl / g 10 ၏နောက်ဆုံးအသံအတိုးအကျယ်မှာပေးထားခဲ့သည်။ D2R ရိုင်းအမျိုးအစား (WT) ကြွက်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။
အသံ-attenuating ထိတ်လန့်အခန်းများ (SR-Lab မှ, San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA), prepulse တားစီးတိုင်းတာတုံ့ပြန်မှု startle ကြောက်-potentiated ထိတ်လန့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုအဘို့, 65 1-msec ဖတ်သွေးခုန်နှုန်းစတင်ခြင်းမှာစတင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ footshock ဖို့တုန့်ပြန်တိုင်းတာရန်, 500 1-msec ဖတ်စျေးမှာစတင်ခြင်းမှာစတင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်၏အထွတ်အထိပ်လွှဲခွင်, prepulse တားစီးတွက်ချက်တုံ့ပြန်မှု, ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ခြင်း, ထိတ်လန့် reactivity ကို startle ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ White ကဆူညံသံသံကိုအခနျး၏မျက်နှာကျက်တွင်တည်ရှိသည် high-frequency ကိုစပီကာဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်ခံအသံကအဆက်မပြတ် 65 dB အဆင့်မှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ အသံအဆင့်ဆင့်အသံ level ကိုစာဖတ်သူ (RadioShack, Fort Worth, TX) ကို အသုံးပြု. (ကစကေး) ဒက်စီဘယ်ယူနစ်အတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကစံကိုက်ညှိယူနစ်အတွက်ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ဖတ် (San Diego မှတူရိယာ, San Diego မှ,, CA) ၏သမာဓိသေချာစေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦး 8-ဝပ်အလင်းတစ် cue အဖြစ်အသုံးပြုမှုအတွက်ထိတ်လန့်အကွက်၏နောက်ဘက်နံရံပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။
တစ်ဦး 5-မိလေ့ကာလအပြီးတွင်တိရိစ္ဆာန်များသံကိုအဆင့်ဆင့်မြင့်တက်နှင့်အတူခုနစျပါးစမ်းသပ်မှုတွေ၏စီးရီးနဲ့အတူတင်ဆက်ခဲ့ကြသည်: 80 ထံမှ 120 dB ရန်, 30 စက္ကတစ်ခု ITI အတူ။ ဒီစီးရီး 10 စမ်းသပ်မှုတွေတစ်ဦးစုစုပေါင်း 70 ကြိမ်တင်ဆက်ခဲ့သည်။ အားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့အသံမရှိခဲ့သည်အတွက်တရားမဝင်သောစမ်းသပ်မှုတွေ မှလွဲ. အသံသွေးခုန်နှုန်း 40 msec ဖြစ်ခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များဘာသာရပ်များ 10 5-msec, 40-dB, သွေးခုန်နှုန်း-တစ်ဦးတည်းစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ပြီးသောပြီးနောက် 120-မိလေ့ကာလပေးထားခဲ့ကြသည်။ ကြွက်ထို့နောက်ထိတ်လန့်သွေးခုန်နှုန်း-တစ်ဦးတည်းအစမ်းသုံး, သုံး prepulse စမ်းသပ်မှုတွေ (50,5နှင့်နောက်ခံအထက်တွင် 10-dB) ၏တဦးတည်း, သို့မဟုတ်လုံးဝမ acoustic လှုံ့ဆော်မှုရှိခဲ့သည့်အတွက်တရားမဝင်သောရုံးတင်စစ်ဆေးဖြစ်စေ၏ 15 စမ်းသပ်မှုတွေနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ intertrial ကြားကာလ (ITI) 15 စက္က (အကွာအဝေး 5-25 စက္ကန့်) ပျမ်းမျှ။ တစ်ဦးကထိတ်လန့်ရုံးတင်စစ်ဆေးအဖြူဆူညံသံတစ် 40-msec, 120-dB သွေးခုန်နှုန်းပါဝင်သည်။ Prepulse စမ်းသပ်မှုတွေ 20 msec အားဖြင့် 70-msec 75-dB သွေးခုန်နှုန်းရှေ့ပြေးဖြစ်သော 80, 40, ဒါမှမဟုတ် 120-dB ပြင်းထန်မှု, တစ် 100-msec ကြာချိန် prepulse ပါဝင်သည်။ [100 × (သွေးခုန်နှုန်း-တစ်ဦးတည်းရုံးတင်စစ်ဆေးအပေါ် prepulse ရုံးတင်စစ်ဆေး / ပျမ်းမျှအားထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ပေါ်ပျမ်းမျှအားထိတ်လန့်တုန့်ပြန်)]% တားစီး =: Prepulse တားစီးအောက်ပါပုံသေနည်းကိုသုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီ prepulse အဆငျ့အဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည်။ DD ကြွက် L-Dopa ဆေးထိုးအောက်ပါ 18-24 နာရီ, တစ်ဦး DA-ကုန်ခမ်းပြည်နယ်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
ကြောက်လန့်-potentiated ထိတ်လန့် (7 ရက်ကြာပါရာဒိုင်း)
တစ်ရက် 1 (အခြေခံ) တွင်တစ်ဦး 5-မိလေ့ကာလအတွင်းအောက်ပါ, ကြွက်တစ်ဦး Pseudo-ကျပန်းပေးခဲ့ 20 စမ်းသပ်မှုတွေ၏စီးရီးအမိန့်, cue နှင့်မျှမ-cue အခြေအနေများအကြားအညီအမျှခွဲ။ အဘယ်သူမျှမ-cue စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ် 40-msec, 105-dB acoustic သွေးခုန်နှုန်းနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ cue စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, တိရစ္ဆာန်တစ် 10-msec, 40-dB သွေးခုန်နှုန်းနှင့်အတူပူးတွဲရပ်စဲထားတဲ့ 105-စက္ကအလင်း cue နှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ITI 120 စက္က (60 စက္ကမှအကွာအဝေး 180) ပျမ်းမျှ။
လေ့ကျင့်ရေးရက်ပေါင်း 2,4နှင့်6အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်ဦး 10-မိလေ့ကာလအပြီးတွင်ကြွက်တစ်ဦး 10-MA, 0.2-စက္က footshock နှင့်အတူပူးတွဲရပ်စဲသော cue အလင်း၏ 0.5 တင်ပြချက်များ, ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ITI 120 စက္က (60 စက္ကမှအကွာအဝေး 180) ပျမ်းမျှ။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုအစည်းအဝေးများရက်ပေါင်း 3,5နှင့်7အပေါ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်နှင့်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့အခြေခံ session ကိုမှတူညီခဲ့ကြသည်။ DD ကြွက်အခြေခံ, လေ့ကျင့်ရေးနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း၎င်းတို့၏နောက်ဆုံး L-Dopa ဆေးထိုးပြီးနောက်နာရီ 18 မှ DA-ကုန်ခမ်းပြည်နယ်, 24 ရှိကြ၏။ L-Dopa ပုံဒဏ္ဍာရီထဲမှာညွှန်ပြအဖြစ်အစည်းအဝေးများလေ့ကျင့်ပြီးနောက်ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ [1 × (cue စမ်းသပ်မှုတွေ / မ cue စမ်းသပ်မှုတွေ-100 အပေါ်တုံ့ပြန်မှု၏ပျမ်းမျှတုံ့ပြန်မှု၏ပျှမ်းမျှ)]% အလားအလာ = အောက်ပါပုံသေနည်းကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကြောက်လန့်-potentiated ထိတ်လန့် (3 ရက်ကြာပါရာဒိုင်း)
နေ့ရက်များကိုဤပါရာဒိုင်း၏ 1 နှင့်3(အခြေခံနှင့်စမ်းသပ်မှု) ကို7ရက်ကြာကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ပါရာဒိုင်းအဘို့အဖော်ပြထားသူတို့အားတူညီခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက်2(လေ့ကျင့်ရေး) တွင်, ကြွက်တစ်ဦး 30-MA, 10-စက္က footshock အတူ 0.2-စက္က cue အလင်း၏ 0.5 ဒဿနိကဗေဒကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ITI ယုတ် 120 စက္က (60 စက္ကမှအကွာအဝေး 180) ဖြစ်ခဲ့သည်။ DD ကြွက်အခြေခံ, လေ့ကျင့်ရေးနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းစဉ်အတွင်း DA-ကုန်ခမ်းခဲ့ကြသည်။
က Short-term memory ကို
baseline နှင့်စမ်းသပ်အစည်းအဝေးများအတွက်7ရက်ကြာပါရာဒိုင်းအဘို့အဖော်ပြထားသူတို့အားတူညီခဲ့ကြသည်။ တစ်ရက်2တွင်တစ်ဦး 5-မိလေ့ကာလအတွင်းအောက်ပါ, ကြွက် 30-ma footshock တစ် 10-စက္ကနှင့်အတူပူးတွဲရပ်စဲထားတဲ့ 0.5-စက္က cue အလင်း၏ 0.2 ဒဿနိကဗေဒပေးထားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ITI 120 စက္က (60 မှအကွာအဝေး 180) ပျမ်းမျှ။ လေ့ကျင့်ရေးအပြီးတွင်အဆိုပါကြွက်များကိုစမ်းသပ်မတိုင်မီ 10 မိဘို့မိမိတို့နေအိမ်လှောင်အိမ်သို့ထားရှိခဲ့ကြသည်။ က Short-term memory ကိုကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အတွက်အသုံးပြုအတူတူပုံသေနည်းအသုံးချဖို့အားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အခြေခံများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း no-cue ခွအေနအေမှတုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုချင်းစီကိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်, အောက်ပါပုံသေနည်းစျေးမှာာင်းတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်: baseline- အပေါ်စမ်းသပ်ခြင်း / ပျမ်းမျှအားထိတ်လန့်တုန့်ပြန်စဉ်ကာလအတွင်း% ာင်း = [(ပျမ်းမျှအားထိတ်လန့်တုန့်ပြန် 1)] 100 ×။
Th ဗီဇ function ကို၏ Cre recombinase-mediated ပွနျလညျထူထောငျ
Isoflurane (1.5-5%) ကြွက်တစ်ဦး stereotaxic တူရိယာ (ဒါဝိဒ်သည် Kopf တူရိယာ, Tujunga,, CA) သို့ထားရှိခဲ့ကြသည် anesthetized ။ midline မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် Bregma, 1 မှ 1.2 posterior: အ ventral tegmental ဧရိယာ၌ Th ဗီဇ function ကို၏ပွနျလညျထူထောငျဘို့, (1012 × 3.5 အမှုန် / ml မှာ titered) recombinant AAV0.5-Cre-GFP ဗိုင်းရပ်စ်မီလီမီတာအတွက် ventral midbrain (သြဒီနိတ်သို့မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ် , Bregma မှ 4.5 ventral; 0.5 μl / hemisphere) ။ BLA DA ၏တိကျသောပွနျလညျထူထောငျဘို့, (2 × 2.1 အမှုန် / ml မှာ titered) Recombinant CAV1012-Cre ဗိုင်းရပ် (:; 1.5 μl / hemisphere Bregma, midline မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက် 3.25, Bregma မှ5ventral မှ 0.5 posterior မီလီမီတာအတွက်သြဒီနိတ်) မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခဲ့ပါတယ် ။ အသေးစိတ်နှစ်ဦးစလုံးဗိုင်းရပ်စ် virus သယ်ဆောင်၏ဖော်ပြချက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြ (Hnasko et al, 2006; ။ Zweifel et al, 2008 ။ ) ။ ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ Micro-ပြုတ်ရည်စုပ်စက် (WPI, Sarasota, FL) မှပူးတွဲပါတစ်ဦး 10-gauge ပြွတ်အပ် (Hamilton က, Reno, NV) ကို သုံး. တစ် 32-မိကာလအတွင်းထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။
50 နှင့်အတူမေ့ဆေးအောက်ပါ / ml ကိုဆိုဒီယမ် pentobarbital (0.2-0.3 ml / တိရိစ္ဆာန်) Mg, ကြွက် transcardially ဖော့စဖိတ်-buffered ဆားထဲမှာ 4% paraformaldehyde အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဖော့စဖိတ်-buffered ဆားနှင့်အတူ perfused ခဲ့ကြသည်။ ခှဲစိတျဦးနှောက်နေ့ချင်းညချင်း, ဖော့စဖိတ်-buffered ဆားထဲမှာ 4% sucrose အတွက် cryoprotected, ပြီးတော့ isopentane အတွက်အမြန်-အေးခဲ 30% paraformaldehyde အတွက် Post-fixed ခဲ့ကြသည်။ သို့မဟုတ်ယုန် Anti-TH (30: 1, Chemicon) ပဋိ: အခမဲ့-floating Coronal အပိုင်း (1000 μm) တစ်ခုခုကို mouse ကိုဆန့်ကျင် TH (1, Chemicon 2000) နဲ့ immunostained ခဲ့ကြသည်။ Immunoflourescence Cy2- သို့မဟုတ် Cy3- conjugated IgG အလယ်တန်းပဋိ (1, ဂျက်ဆင် ImmunoResearch 200) ကို အသုံးပြု. အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အစွန်းအထင်းကဏ္ဍများ, ဆလိုက်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထား coverslipped နှင့်ဖြောင့်မတ် brightfield ဏု (Nikon ကင်မရာ) ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်အတွက်မှတ်ချက်ချအဖြစ်ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံများနှင့်တလမ်း ANOVA, Fisher က Post-hoc နှင့်ကျောင်းသားရဲ့ t-စမ်းသပ်မှုပါဝင်သည်ဖျော်ဖြေလေ့လာဆန်းစစ်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Statistica software ကို (Statsoft, Tulsa, ဥက္ကလာဟိုးမား) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
DD ကြွက်နဂိုအတိုင်း acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်နှင့်ပုံမှန် prepulse တားစီးပြီ
ကြောက်လန့်-potentiated ထိတ်လန့်နဂိုအတိုင်း acoustic ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့် sensorimotor Gates လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန် DA ၏မရှိခြင်းအတွက်ပြောင်းလဲလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်, အသံမျိုးစုံဒယ်ဆီဘယ်အဆင့်ဆင့်မှ DA-ကုန်ခမ်း DD ကြွက် (18 L-Dopa ပြီးနောက်နာရီ 24 မှ) ၏တုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှု (ပုံ 1A) ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲအစီအမံ ANOVA genotype နှင့် genotype နှင့် sound အဆငျ့အကြားမျှသိသာအပြန်အလှန်မရှိအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။
DA သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတုန်လှုပ်စေသောသင်ယူခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအသံပြင်းအားမှတစ် ဦး က, Acoustic တုန်လှုပ်တုံ့ပြန်မှု (= = 10, အနက်ရောင်ရင်ပြင်) နှင့် DD ကြွက် (= = 10, ပွင့်လင်းရင်ပြင်) ။ တုန့်ပြန်ချက်ကိုမတရားယူနစ်များတွင်အစီရင်ခံထားသည်။ B, Prepulse တားစီးထိန်းချုပ်မှု3different ကွဲပြားခြားနားသော prepulse ပြင်းထန်မှု (= = 10, အနက်ရောင်အရက်ဆိုင်) နှင့် DD ကြွက် (= = 10, ပွင့်လင်းအရက်ဆိုင်) မှာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ Asterisks p <0.05, ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA ဖျောညှနျး။ ကို C,7ရက်ကြာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် - အလားအလာတုန်လှုပ်မှု Paradigm သရုပ်ဖော်။ အခြေခံနှင့်စမ်းသပ်သည့်နေ့ရက်များတွင်ကြွက်များသည် non-cue ၏တင်ပြချက် ၁၀ ခု (၄၀ မက္ကက်စ်ကြာချိန်၏ ၁၀၅ dB startle Pulse ၏တင်ပြချက်) နှင့် ၁၀ ချက်တင်ပြချက် (၁၀ စက္ကန့်အလင်း cue) သည် pseudorandom ၏ အမိန့်။ လေ့ကျင့်ရေးနေ့၌ကြွက်များသည် ၁၀ စက္ကန့်အလင်း cue ၁၀ တွဲကိုရရှိပြီး ၀.၅ စက္ကန့်ကြာချိန် ၀.၂-mA footshock နှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမ cue စမ်းသပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လေ့လာမှု cue စမ်းသပ်မှုအပေါ်အာနိသင်တစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်စမ်းသပ်နေ့ရက်ကာလအပေါ်လေ့လာအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက် L-Dopa (၃) နာရီအကြာတွင် D, DD ကြွက်များ (n = ၁၀၊ ပွင့်နေသောအရက်ဆိုင်) (စမ်းသပ်မှု ၁ နှင့် ၂) ကိုလေ့လာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ DD ကြွက်များကိုလေ့ကျင့်ပြီးနောက် (၆ ရက်) အကြာတွင်ထိုးသွင်းလိုက်သောအခါသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောစမ်းသပ်မှု (၃) ကိုပြသခဲ့သည်။ Asterisks p <10, ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA ဖျောညှနျး။ အီး, လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကာလအတွင်းထိတ်လန့် reactivity ကို၏တိုင်းတာမှုများ (ထိန်းချုပ်မှု n = 40, အနက်ရောင်အရက်ဆိုင်; DD n = 105, ပွင့်လင်းအရက်ဆိုင်) ။ တုန့်ပြန်ချက်ကိုမတရားယူနစ်များတွင်အစီရင်ခံထားသည်။ F, DA အရေးကြီးသောအတွက်အရေးပါသောအချိန်ကာလဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြု 10 ရက်ကြာကြောက်စိတ် - အလားအလာတုန်လှုပ်မှုပါရာဒိုင်းသရုပ်ဖော်စနစ်။ cue-shock အတွဲပေါင်း ၃၀ လုံးကိုတစ်နေ့တာတွင်ပေးခဲ့သည်။ DD ကြွက်များအား L-Dopa ဖြင့်ချက်ချင်း၊ ၁ နာရီသို့မဟုတ် ၃ နာရီသင်တန်းပြီးဆုံးသည်။ G, သာလျှင်ထိန်းချုပ်မှု (= = 10, အစိုင်အခဲအနက်ရောင်အရက်ဆိုင်, C) နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအပြီးချက်ချင်းထိုးသွင်း DD ကြွက် (= = 10, ဒေါင်လိုက်အစင်း, 10 နာရီ) စမ်းသပ်နေ့၌ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် - တုန်လှုပ်ချောက်ချားပြသခဲ့သည်။ L-Dopa 0.5hr (n = 0.2, diagonal stripes) သို့မဟုတ် 10h (n = 3, open bar) လေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးနောက်ပေးထားသော DD ကြွက်များတွင်တွေ့ရသောကြောက်ရွံ့ခြင်းအရှိန်မြင့်တုန်လှုပ်စေသောအဆင့်သည်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။ Asterisks post-hoc အခြေခံ, Fisher နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် p <2 ဆိုလိုသည်။ အစီရင်ခံအားလုံးတန်ဖိုးများ SEM DA- ကုန်ခမ်း DD ±နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်ကိုလည်းလေ့ sensorimotor တံခါးပေါက်အတွက်လိုငွေပြမှု detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုသော prepulse တားစီးပါရာဒိုင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ Prepulse တားစီး DD ကြွက် (ပုံ 4B; ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA, genotype: F1 ကို,2= 6; p <3; prepulse အဆင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်မျှသိသာ genotype ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာညွှန်ပြ DD ကြွက်တစ် ဦး DA- ကုန်ခမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိနေစဉ် sensorimotor တံခါးကိုယန္တရားများအတွက်တုန်လှုပ်တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်လျော့နည်းအတွက်ချို့တဲ့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် - အလားအလာတုန်လှုပ်စမ်းသပ်မှုမှာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုအတည်ပြု။
Dopamine ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်လေ့လာသင်ယူများအတွက်အရေးပါသောအချိန်ကလိုအပ်
DA သည်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စေသောအခြေအနေကိုလေ့လာရန်လိုအပ်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန် DD နှင့်ထိန်းချုပ်သည့်ကြွက်များကို ၇ ရက်ကြာကြောက်ရွံ့သောစွမ်းအားရှိသည့်တုန်ခါမှုစံနမူနာကိုပြခဲ့သည်။ DD ကြွက်များကို DA-deplet state တွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင်စမ်းသပ်ပြီးနောက်ထိန်းချုပ်သည့်ကြွက်များသည် DD ကြွက်များတွင်လေ့ကျင့်ခြင်းမခံရသည့်တစ်ခုတည်းသောလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်အပြီးတွင်ကြောက်ရွံ့တောက်ပမှုကိုပြသခဲ့သည် (ပုံ ၁ ဒ; ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာချက်များ ANOVA, genotype, F7, 1 = 24, p <1) ။ ထပ်မံလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးနောက်၌ပင် DD ကြွက်များသည်ကြောက်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးရန်ပျက်ကွက်သော်လည်းထိန်းချုပ်သည့်ကြွက်များသည်အားကောင်းသောလေ့လာမှုကိုဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာနေ့ ၆ ရက်တွင်လေ့ကျင့်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပင် L-Dopa ကိုပေးသည့်အခါ DD ကြွက်များသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်စေသောအရာ (အခြေခံ - ANOVA F1, 18 = 7.4590, p <0.05) ထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ပုံ 6D) ။ DD နှင့်ထိန်းချုပ်သည့်ကြွက်များအတွက်လေ့ကျင့်သည့်နေ့များတစ်လျှောက်တွင်မည်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းတွင်မဆိုကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိပါ။ DD ကြွက်များတွင်သင်ယူမှုလိုငွေပြမှုသည်ခြေထောက်ကိုမခံစားရနိုင်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းပြသသည် (ပုံ ၁E) ။ DA အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအချိန်ပြသမှုကိုသရုပ်ဖော်ရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုက L-Dopa အုပ်ချုပ်ရေး၏အချိန်နှင့်ကွဲပြားသည်။ DD နှင့်ထိန်းချုပ်သည့်ကြွက်များအား light-shock pairings ၃၀ (ပုံ ၁F) ပါဝင်သည့်လေ့ကျင့်ရေးသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးပြီးနောက်၊ L-Dopa ဖြင့်ချက်ချင်း၊ ၁ နာရီသို့မဟုတ် ၃ နာရီကြာလေ့ကျင့်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ DD ကြွက်များကိုလေ့ကျင့်မှုအပြီးချက်ချင်းထိုးသွင်းလိုက်သည်စမ်းသပ်မှုနေ့၌ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဆင်တူသည်ကို D-1 မှ ၃ နာရီသို့မဟုတ် ၃ နာရီထိုးသွင်းပြီး DD ကြွက်များသည်လေ့ကျင့်မှုအပြီးလေ့လာမှုမရှိကြောင်းပြသသည်။ ကုသမှု session တစ်ခု F18, 9.1999 = 0.01, p <1) ×ကုသမှု။ ဤရွေ့ကားဒေတာညွှန်ပြ DA ကိုကွောကျရှံ့ - အလားအလာတုန်လှုပ်မှုပါရာဒိုင်းအတွက်လေ့လာသင်ယူရန်အကနျ့အခြိနျကာလအတွင်းလိုအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ သို့သော် DD တိရိစ္ဆာန်များသည် DA မရှိခြင်းတွင်အမြဲတမ်းစမ်းသပ်ခံခဲ့ရသောကြောင့်ကြောက်ရွံ့သောမှတ်ဥာဏ်ကိုဖော်ပြရန် DA သည်မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင် DA ၏မရှိခြင်းသည် shock reactivity ကိုထိခိုက်စေသည်။
D1R ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အဘို့လိုအပ်
ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စေသောတုန်ခါမှုအတွက် DA receptors များသည်မည်သည့် DA receptor များအားလေ့လာရန် D1R KO ကြွက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ D1R KO နှင့်ထိန်းချုပ်မှု၊ တောရိုင်းအမျိုးအစား (WT) ကြွက်များကို DD ကြွက်များ (ပုံ ၂ က) တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ D2R KO နှင့် WT ကြွက်များကြားမည်သည့်အသံအဆင့်စမ်းသပ်မှုမဆိုသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ။ D1R KO ကြွက်များတွင်နဂိုအတိုင်းအသံနှင့်တုန်ခါမှုတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ, D1R KO ကြွက်များတွင်နဂိုအတိုင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုတားစီးမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရပြီ (Ralph-Williams et al ။ , 1) ။ ၇ ရက်ကြာသောကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဖြစ်စေသောတုန်လှုပ်စေသော Paradigm တွင်စမ်းသပ်ပြီးသောအခါ D2002R KO ကြွက်များသည်မည်သည့်နေ့တွင်မဆိုလေ့လာမှုကိုဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် (ပုံ ၂ ခ; ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာမှုများ ANOVA genotype × test day F7, 1 = 2; p <3) ။ စမ်းသပ်ကာလ ၂ နှင့် ၃ ရက်များတွင်ကြွက်များတွင်စမ်းသပ်မှု ၂ နှင့် ၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသိသာသောကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောတုန်ခါမှုရှိသည် (p <48 and p <6.28, အသီးသီးစမ်းသပ်မှု ၂ နှင့် ၃ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Fisher post-hoc ဖြစ်သည်။ ) D0.01R KO ကြွက်များသည်လေ့ကျင့်မှုသုံးရက်စလုံးတွင် WT ထက်ပိုမိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှုရှိကြသည် (ပုံ 2C; ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာမှုများ ANOVA, genotype F3, 0.05 = 0.01; p <2; ထူးခြားသောမျိုးရိုးဗီဇ×လေ့ကျင့်ရေးနေ့ကိုမတွေ့ရှိရ) ။ ထို့ကြောင့် D3R KO ကြွက်များသည် WT ကြွက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခြေထောက်တုန့်ပြန်မှုကိုမြင့်မားသောတုန့်ပြန်မှုများရှိသော်လည်း ၃ ရက်ကြာလေ့ကျင့်ပြီးနောက်၌ပင်သူတို့သည်ကြောက်စိတ်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ D1R KO တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သင်ယူမှုချို့ယွင်းဖော်ပြသည်နှင့် cue- မှီခိုကွောကျရှံ့ခွငျးအေးစက်အတွက် DA ၏သက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက် D2R ဆိုလို။ ပုံ ၂ D1R KO ကြွက်များသည်သင်ယူမှုကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ တစ် ဦး က D16R WT (, = 10.18, အနက်ရောင်ရင်ပြင်) နှင့် KO (= = 0.01, ပွင့်လင်းရင်ပြင်) ကြွက်၏တစ် ဦး က, Acoustic တုန်လှုပ်တုံ့ပြန်မှု။ B, D1R ကြွက်များနှင့်အတူ3ရက်ကြာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် - တုန်လှုပ်စေပါရာဒိုင်း၏ရလဒ်များ။ D1R WT ကြွက်များ (n = 1, solid black bars)၊ D2R KO ကြွက်များ (n = 1, open bar) သည်စမ်းသပ်သည့်နေ့တွင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတုန်လှုပ်စေသည်။ ၃ Asterisks သည် p <1 ကိုရည်ညွှန်းပြီး KO နှင့် WT နှင့် Fisher နှိုင်းယှဉ်သည်။ hoc ။ ကို C, ထိတ်လန့် reactivity ကို၏တိုင်းတာ။ D9R KO ကြွက်များ (n = 9, open bar) သည် WT (n = 7, solid bar) ထက်ခြေထောက်ကို ပို၍ တုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ Asterisks p <1, ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA ဖျောညှနျး။ တင်ပြသောတန်ဖိုးအားလုံးသည်တုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထိတ်လန့်ခြင်းတုန့်ပြန်မှုအတွက်± SEM ကိုဆိုလိုသည်။
ကြောက်လန့်-potentiated ထိတ်လန့် D2R KO ကြွက်တွေမှာနဂိုအတိုင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့တခြား D2 ကဲ့သို့ receptors လိုအပ်ပါတယ်
D2 ကဲ့သို့ receptors ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်များအတွက်လိုအပ်သောရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းရန်, D2R KO နှင့် WT ကြွက်တွေဟာထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ WT နှင့် D2R KO ကြွက် D2R KO ကြွက်တစ်ခုနဂိုအတိုင်း acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန် (ပုံ 3A) ရှိသည်ညွှန်း, စမ်းသပ်ပြီးအားလုံး dB အဆင့်နှင့်ညီမျှထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ D1R KO ကြွက်အလားတူကျနော်တို့ D2R KO ကြွက်နဂိုအတိုင်း prepulse တားစီးရှိသည်ရှုလေ့လာခဲ့ကြ (Ralph-Williams က et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ7ရက်ကြာကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ပါရာဒိုင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါ, WT နှင့် D2R KO နှစ်ဦးစလုံးကြွက်အားလုံး3စမ်းသပ်မှုရက်နှင့်ညီမျှအဆင့်ဆင့်မှာကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ပြသ (ပုံ 3B) နှင့်ထိတ်လန့် reactivity ကိုအုပျစု (ပုံ 3C) အကြားကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ D2R ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်လေ့လာသင်ယူဘို့မလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
D2R KO ကြွက်များတွင်နဂိုအတိုင်းရှိနေသောကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုရှိသည်။ A, D2R WT (= = 8၊ အနက်ရောင်ရင်ပြင်) နှင့် KO ကြွက်များ၏ Acoustic တုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှု (= = ၈၊ ပွင့်လင်းရင်ပြင်) ။ B, D8R ကြွက်များနှင့်အတူ7ရက်ကြာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် - တုန်လှုပ်စေပါရာဒိုင်း၏ရလဒ်များ။ WT (n = 2, solid bar) နှင့် KO (n = 8, open bar) ကြွက်များသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတုန်လှုပ်စေသောသိသိသာသာအဆင့်ကိုပြသည်။ ကို C, လေ့ကျင့်ရေးစဉ်အတွင်းထိတ်လန့် reactivity ကို၏တိုင်းတာမှုများ (WT, n = 8, အစိုင်အခဲအရက်ဆိုင်; KO, n = 8, ပွင့်လင်းအရက်ဆိုင်) ။ : D, WT နှင့် D8R KO ကြွက် (= = တစ် ဦး ချင်းစီ = 2) 11 ရက်ကြာကွောကျရှံ့ - အလားအလာတုန်လှုပ်မှုပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ D3R KO ကြွက်များကိုလေ့ကျင့်ခြင်းမပြုမီ eticlopride (၀.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) တိုက်ကျွေးပြီးစမ်းသပ်မှုတွင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတုန်လှုပ်စေသည်။ Asterisks က p <2, KO နှင့် WT, Fisher post-hoc ဖြစ်သည်။ တင်ပြသောတန်ဖိုးအားလုံးသည်ပျမ်းမျှ± SEM ဖြစ်သည်။ တုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထိတ်လန့်ခြင်းတုန့်ပြန်မှုတို့အတွက်တုန့်ပြန်မှုများကိုမတရားသောယူနစ်များတွင်ဖော်ပြသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရ D0.5 ကဲ့သို့သောရန်သူများကိုစနစ်တကျဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ amygdala သို့ဖြစ်စေအုပ်ချုပ်မှုသည်အခြေအနေအားကြောက်ရွံ့မှုကိုထိခိုက်စေသည် (Guarraci et al, 0.01; Greba et al, 2; ။ Ponnusamy et al, 2000) ။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ငါတို့ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုလေ့လာဖို့ D2001R KO ကြွက်တွေကို D2005R လို antagonist eticlopride (၀.၅ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ ip အပ်ပြီး) ၃ ရက်ကြာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဒွိဟဖြစ်စဉ်ကိုလေ့ကျင့်မှုမပေးခင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ လေ့ကျင့်မှုအပြီးတွင် ၂၄ နာရီစမ်းသပ်ပြီးချိန်တွင်မော်တော်ယာဉ်ထိုးသွင်းထားသော WT ကြွက်များသည်ကြောက်စိတ်ကိုတွန်းအားပေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ eticlopride-injected D2R KO ကြွက်များသည်လေ့လာမှုကိုမပြခဲ့ပါ (ပုံ 2D; ထပ်ခါတလဲလဲတိုင်းတာမှုများ ANOVA genotype × day F0.5,3= 24, p <2) ။ ဤရလဒ်သည် D3R အပြင် DA1 ကဲ့သို့မိသားစု၏ receptors ၏ D အင်္ဂါမိသားစုသော်လည်း D20R သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတုန်လှုပ်စေသောအင်အားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
က Short-term memory ကို DD နှင့် D1R KO ကြွက်များတွင်ချို့ယွင်းနေပါသည်
DA သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတုန်လှုပ်စေသောကြောက်စိတ်ကိုလေ့လာရန်သင်တန်းပြီးနောက်တစ်နာရီအတွင်းလိုအပ်သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများတွင်ကြောက်စိတ်ကိုတုန်လှုပ်စေသောရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ DA လည်းရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်အတွက်လိုအပ်မရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ထွက်ထားကြ၏။ DD တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကိုလေ့ကျင့်ပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်ခန့်တွင်ရေတိုမှတ်ဥာဏ်ကိုစမ်းသပ်သည့် ၂ ရက်တာပါရာဒိုင်းကိုပြခဲ့သည်။ စမ်းသပ်သည့်နေ့တွင် shock sensitization နှင့် short-memory memory တို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Shock sensitization သည် cue နှင့်မသက်ဆိုင်သော footshock အောက်တွင် acoustic တုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှု၏အခြေအနေ - မှီခိုသည့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် (McNish et al, 1997; Richardson, 2000; Risbrough et al ။ , 2008) ။ DD ကြွက်များသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသောခံစားမှုကိုခံစားခဲ့ရသည် (ပုံ ၄ ခ၊ p <4; ကျောင်းသား၏ t-test) အလားတူစွာထိန်းချုပ်သည့်ကြွက်များသည် DD ကြွက်များတွင်မရှိသောအားကောင်းသောရေတိုမှတ်ဥာဏ်ကိုပြသခဲ့သည် (ပုံ ၄ ခ၊ p <4, DD နှိုင်းယှဉ်မှုနှိုင်းယှဉ်မှု၊ ကျောင်းသား၏စမ်းသပ်မှု) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာအကြံပြု DA ကြောက်လန့် -potentiated တုန်လှုပ်၏ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် DA သည်အခြေအနေကိုမှီခိုသောကြောက်ရွံ့မှုသင်ယူခြင်းအတွက်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာများကိုလည်း DA အေးစက်တည်ငြိမ်မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စ၏တည်ငြိမ်များအတွက်အရေးပါသောကာလ၌လိုအပ်သည်သောယခင်နိဂုံးချုပ်အားဖြည့်။ ပုံ ၄ ရေတိုမှတ်ဉာဏ်နှင့် shock sensitization သည် DA ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ် ဦး က, အမူအကျင့်ပါရာဒိုင်း၏ဒီဇိုင်း။ တစ်ရက် ၁ တွင်အခြေခံတုန်လှုပ်စေသောတုံ့ပြန်မှုကိုရရှိသည်။ ဒုတိယနေ့တွင်ကြွက်များသည် cue-shock အတွဲ ၃၀ အားလုံးကိုရရှိပြီး၊ စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ ၁၀ မိနစ်အတွင်းသူတို့၏နေအိမ်အတွင်းသို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုကြွက်များ (= = ၁၀၊ အနက်ရောင်အရက်ဆိုင်) များသည် DD နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကြီးမားသောထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတုန်ခါစေသည်။ Asterisks p <0.05; ကျောင်းသား၏စာမေးပွဲ။ ကို C, WT (= = 7, အနက်ရောင်အရက်ဆိုင်) နှင့် D1R KO (= = 7, ပွင့်လင်းအရက်ဆိုင်) ကြွက်နဂိုအတိုင်းထိတ်လန့်အာရုံရှိသည်။ WT သာလျှင်ရေတိုမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုအတွင်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်။ Asterisks p <0.05, KO နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် WT; ကျောင်းသား၏စာမေးပွဲ။ : D, WT (= = 8, အနက်ရောင်အရက်ဆိုင်) ကြွက် D2R KO (= = 8, ပွင့်လင်းအရက်ဆိုင်) ထက်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ်စျေးမှာ sensitization ရှိသည်။ WT နှင့် D2R KO ကြွက်များအကြားတွင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အလားအလာရှိသည်။ Asterisks p <0.05, KO နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် WT; ကျောင်းသား၏စာမေးပွဲ။ အစီရင်ခံအားလုံးတန်ဖိုးများကို SEM ±နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည် တိုတောင်းသောကာလမှတ်ဉာဏ်နှင့်ထိတ်လန့် sensitization အတွက် DA ၏အခန်းကဏ္ateကိုဖြန်ဖြေပေးသောဘယ် receptor မျိုးကွဲစူးစမ်းဖို့, D1R နှင့် D2R KO ကြွက် DD ကြွက်ကဲ့သို့တူညီသောပါရာဒိုင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ D1R KO ကြွက်များတွင် WT ကြွက်များထက်တိုတောင်းသောကာလမှတ်ဉာဏ်ပမာဏသိသိသာသာနိမ့်သည် (ပုံ ၄ စီ၊ p <4; ကျောင်းသား၏ t-test); သို့သော် D0.05R KO တွင်သိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လေ့လာသည့်လေ့လာမှုမှာနဂိုအတိုင်းရှိနေသည်ဟုညွှန်ပြသည့်ကြွက်များနှင့်သိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ။ D2R KO ကြွက်များတွင် WT ထက်သိသိသာသာနိမ့်ပါးသောခံစားမှုအဆင့် (ပုံ ၄D၊ p <4; ကျောင်းသား၏ t-test) ရှိသော်လည်း WT နှင့် KO ကြွက်တို့တွင်တိုတောင်းသောမှတ်ဉာဏ်ပမာဏမတူပါ။
အဆိုပါ basolateral amygdala မှ DA ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ခွင့်ပြုပါရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ basolateral amygdala cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်၏ဝယ်ယူဘို့အရေးကြီးသည် (Maren, 2003; Maren နှင့် Quirk, 2004; Sigurdsson et al, 2007 ။ ) ။ ထို့အပွငျ basolateral amygdala function ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည့် DA များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိ (Rosenkranz နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2002; Bissiere et al, 2003; ။ Marowsky et al, 2005 ။ ) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် DA ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အဘို့လိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းရန်, DD နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်တွေဟာ basolateral amygdala (ပုံ 2A) သို့တစ် CAV5-Cre အားနည်းချက်ကိုအပြန်အလှန်ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီအားနည်းချက်ကို retrogradely က Th ဗီဇလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်ဘယ်မှာ DA အာရုံခံမှဆေးထိုး၏ site ကနေပို့ဆောင်နေသည် (Hnasko et al ။ , 2006) ။ Immunohistochemistry TH အဆိုပါ basolateral CAV2-Cre-ထိုးသွင်း DD ကြွက် (ပုံ 5J) ၏ amygdala ပေမယ် dorsal striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ပျက်ကွက် (ပုံ 5G) တွင်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ TH အဓိက ventral tegmental ဧရိယာ (ပုံ 5D) ၏ caudal ဝေမျှအတွက်အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ပကတိဖြစ်လေ၏။ စာပေ (Ford ကား et al အစီရင်ခံ amygdala-ထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့ဂဏန်းနှင့်ကိုက်ညီသောထိုးသွင်း DD ကြွက်တွေမှာ 10-μmအပိုင်းနှုန်း 30 TH-အပြုသဘောဆဲလ်ထက်ပုံမှန်အားနည်းပါးလာရှိခဲ့သည်, 2006; ။ Lammel et al ။ , 2008; Margolis et al, 2008) ။ ။
DD ကြွက်တွေမှာ endogenous TH ထုတ်ဖော်ဒေသကြီး-တိကျတဲ့ပွနျလညျထူထောငျ။ တစ်ဦးက, သိထား Illustrator ဆေးထိုး basolateral amygdala (BLA) ကယ်ဆယ်ရေးစမ်းသပ်ချက်အဘို့ကိုသြဒိနိတ်။ DD (ဎ = 7) နှင့်ထိန်းချုပ်မှု (ဎ = 7) ကြွက် CAV2-Cre virus သယ်ဆောင် (0.5 ul / hemisphere) နှင့်အတူ BLA သို့မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ B က, သိထား Illustrator ဆေးထိုး ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကယ်ဆယ်ရေးစမ်းသပ်ချက်အဘို့ကိုသြဒိနိတ်။ AAV1-Cre-GFP (0.5 ဎ =) မြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်း (7 ul / hemisphere) က DD ၏ VTA (ဎ = 10) သို့နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်ခဲ့သည်။ Paxinos နှင့် Franklin, 2001 ထံမှအဆင်ပြေအောင်ကိန်းဂဏန်းများ။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး-ထိုးသွင်း WT ထိန်းချုပ်မှု ventral midbrain ဖေါ်ပြခြင်း Coronal အချပ်အတွက် TH အစွန်းအထင်းများကို C-E, နှိုင်းယှဉ် (ချဲ့× 4), BLA-ထိုးသွင်း DD နှင့် VTA-ထိုးသွင်း DD ။ (; မြှားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ SNpc) ကို C, ထိန်းချုပ်မှု midbrain အတွက် TH immunohistochemistry အဆိုပါ VTA နှင့် substantia nigra ပိုဒျ compacta အခုနှစ် DA အာရုံခံ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ : D, BLA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်တွေဟာ VTA အတွက် TH-အပြုသဘောအာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကရှိခဲ့ပါတယ်။ Inset အဆိုပါ Soma နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် TH စကားရပ်ဖေါ်ပြခြင်းသည်ဘောငျဒေသ၏ချဲ့×တစ် 40 ဖြစ်ပါတယ်။ အီး, VTA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်တွေဟာ VTA အတွက်အများစုနေထိုင်ပြီး TH စကားရပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ (မြှားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ) SNpc အတွက် TH အစွန်းအထင်းများမှတ်ချက်မရှိခြင်း။ dorsal striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် TH စကားရပ်ဖေါ်ပြခြင်းက F-H ကို, WT ဗိုင်းရပ်စ်-ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုကနေမှု Coronal အပိုင်း (ချဲ့× 4), BLA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့နှင့် VTA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်။ F ကို, WT ဗိုင်းရပ်စ်-ထိုးသွင်းထိန်းချုပ်မှုဟာ (မြှားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ) ကို dorsal ၏တခုလုံးနှင့် ventral striatum တစ်လျှောက်လုံး TH စကားရပ်ရှိသည်။ , G, BLA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်များ၏ striatum အတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိ TH စကားရပ်ရှိပါသည်။ H ကို, VTA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက် (မြှားခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ) ကို dorsal striatum အတွက်အစွန်းအထင်းသာနည်းပါးနှင့်တကွ, နျူကလိယ accumbens အတွက် TH စကားရပ်ရှိသည်။ ငါ-K သည်, မှု Coronal အပိုင်း (ချဲ့× 10) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး-ထိုးသွင်း WT ထိန်းချုပ်မှုများ BLA အတွက် TH စကားရပ်ဖေါ်ပြခြင်း, BLA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့နှင့် VTA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်။
Basolateral amygdala- ထိုးသွင်းကြွက်3ရက်ကြာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် - အလားအလာတုန်လှုပ်မှုပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ တိုတိုမှတ်ဉာဏ်နှင့်ထိတ်လန့်မှုဒဏ်ခံစားနိုင်မှုကိုလေ့ကျင့်ပြီးနောက် ၁၀ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်အကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင်ကြောက်ရွံ့စေနိုင်သောတုန်လှုပ်စေသောရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုလေ့လာခဲ့သည် (ပုံ - ၆) ။ စိတ်ဝင်စားစရာကသာ basolateral amygdala- ထိုးသွင်း DD ကြွက်တွေမှာသာပြန်လည်မှတ်မိခဲ့ပါတယ်။ ရေတိုမှတ်ဉာဏ်အဆင့်များသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် (p <10; ကျောင်းသား၏ t-test) နှင့် shock sensitization (p <24; ကျောင်းသား၏ t-test) သည်ထိန်းချုပ်မှုထက်သိသိသာသာနိမ့်သည်။ လေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းအဖွဲ့များအကြားထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောဓာတ်ပြုခြင်းအဆင့်များနှင့်အတူတူ (BLA-rescued DD:6± 0.05 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 0.05 ± 1613) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာအကြံပြုသည် ventral tegmental areaရိယာ၏ caudal ရှုထောင့်ကနေအဓိကအားဖြင့် basolateral amygdala မှ DA စီမံကိန်း, cued- ကွောကျရှံ့မှတ်ဉာဏ်၏ရေတိုရေရှည်ဝယ်ယူဘို့လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်း, သို့သော်သည်အခြား cortical သို့မဟုတ် limbic ဦး နှောက်toရိယာမှ DA စီမံချက်များများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ် ဆက်စပ်သင်ယူမှုနှင့်ကြောက်စိတ်မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စ၏ရေရှည်တည်ငြိမ်။ ပုံ 333 Basolateral amygdala (BLA) မှကယ်တင်ခဲ့သော DD ကြွက်များသည်တိုတောင်းသောမှတ်ဥာဏ်ကိုပြန်လည်ရရှိစေပြီး ventral tegmental area (VTA) မှကယ်တင်ခဲ့သော DD ကြွက်များသည်သင်ယူမှုကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်။ တစ် ဦး က, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး - ထိုးသွင်း WT ထိန်းချုပ်မှု (= = 1758) နှင့် BLA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက် (= = 260) သုံးရက်ကြာကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် - အလားအလာတုန်လှုပ်မှုပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ လက်ဝဲဘက်, BLA မှကယ်တင်ထားသောကြွက်များတွင် Shock sensitization သိသိသာသာနိမ့်သည်။ အလယ်အလတ်တိုတိုမှတ်ဉာဏ် (STM) ကို BLA မှကယ်တင်ထားသောကြွက်များတွင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ မှန်ပါသည်၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကဲဖြတ်ထားသောရေရှည်မှတ်ဉာဏ် (LTM) သည် BLA ကယ်ဆယ်ရေးကြွက်များတွင်မရှိခြင်း ၃ ရက်ကြာကြောက်ရွံ့မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်လာသော Paradigm တွင် B, WT ထိန်းချုပ်မှုမှရလဒ်များ (= = ၁၀) နှင့် VTA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်များ (= = ၇) ။ လက်ဝဲ, VTA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်များတွင် Shock sensitization ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားဘူး အလယ်အလတ်နှင့်ညာဘက်ရှိ STM နှင့် LTM မှတ်ဥာဏ်များသည် VTA-rescue ကြွက်များတွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Asterisks သည် p <6၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှု၊ ကျောင်းသား၏စစ်ဆေးမှုကိုညွှန်းသည်။ အစီရင်ခံအားလုံးတန်ဖိုးများကို SEM ±နည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်
ventral tegmental ဧရိယာ DA အာရုံခံမှ TH ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင်ယူမှုများအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါ ventral midbrain ကနေထွက်ရှိတဲ့နှစ်ခုအဓိက DA ဆားကစ်ရှိပါတယ်; အဆိုပါ substantia nigra ပိုဒျ compacta အထံမှအဓိကအားဖုံးလွှမ်းနေတာကို mesostriatal ဆားကစ်, နှင့် mesocorticolimbic circuit ကို, အ ventral tegmental ဧရိယာကနေအဓိကအားစတင်ပေါ်ပေါက်လာ။ ကျယ်ပြန့်သည့် basolateral amygdala အပါအဝင် cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်လူသိများဦးနှောက်အရေးပါဖို့ mesocorticolimbic circuit ကိုစီမံကိန်းများကို (Bjorklund နှင့် Dunnett, 2007; ။ Lammel et al, 2008) ။ mesocorticolimbic DA ပိုပြီးပြည့်စုံပွနျလညျထူထောငျရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ထိတ်လန့်ာင်းလိုအပ်ပါသည်ရှိမရှိလေ့လာစူးစမ်းခြင်းငှါ၎င်း, DD နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်အထူး endogenous Th ဗီဇ (ပုံ 1B) ကိုသက်ဝင်စေဖို့ ventral tegmental ဧရိယာသို့တစ်ဦး AAV5-Cre-GFP အားနည်းချက်ကိုအပြန်အလှန်ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။
Immunohistochemistry ပစ်မှတ်စကားရပ် TH ပွနျလညျထူထောငျခဲ့သော DA အာရုံခံခြင်းနှင့်အရာ detect လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ TH အစွန်းအထင်းကို non-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက် (Hnasko et al ။ , 2006) တွင်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Immunohistochemistry ventral tegmental ဧရိယာ-ထိုးသွင်း DD ကြွက်တွေမှာ TH ၏ပွနျလညျထူထောငျပု ventral tegmental ဧရိယာနှင့်၎င်း၏ပစ်မှတ် (ပုံ 5E, H ကို, K) မှအလွန်အမင်းတိကျတဲ့ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် basolateral amygdala ကြံ့ခိုင် TH စကားရပ် (ပုံ 5H, K) ရှိခဲ့သော်လည်း TH အစွန်းအထင်းတစ်နည်းပါးခြင်း, dorsal striatum, အ substantia nigra ပိုဒျ compacta အထဲကနေထွက်ရှိတဲ့ DA အာရုံခံ၏အဓိကပစ်မှတ် (ပုံ 5H) တွင်ရှိခဲ့သည်။
Ventral tegmental ဧရိယာ-ထိုးသွင်းကြွက် basolateral amygdala-ထိုးသွင်းကြွက် (ပုံ 3B) အဖြစ်အတူတူ6ရက်ကြာကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ shock sensitive ကရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဟာ ventral tegmental ဧရိယာ-ထိုးသွင်း DD ကြွက်များတွင်အဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။ လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်း shock reactivity ကိုအုပျစု (VTA-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD နှိုင်းယှဉ် 1653 ± 268: 1602 ± 198 ထိန်းချုပ်ရေး) တို့အကြားတူညီခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကို ventral tegmental ဧရိယာကနေ DA စီမံချက်များရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည် cued-ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်အဖြစ်အခြေအနေတွင်-မှီခိုထိတ်လန့်အကဲဆတ်ခြင်းဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤရလဒ်သည်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် DA cued-ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်လိုအပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ DA လေ့ကျင့်ရေးအောက်ပါချက်ချင်းပကတိဖြစ်လေ၏မဟုတ်လျှင် DD ကြွက်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ပြနိုင်ခဲ့ပေ။ DD ကြွက်လည်းရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ထိတ်လန့်ာင်းချို့ယွင်းပါပြီ။ အရေးကြီးတာက, prepulse တားစီး sensorimotor Gates DA ၏မရှိခြင်းအတွက်လျော့မပေးကြောင်းညွှန်ပြ, DA-ကုန်ခမ်း DD ကြွက်တွေမှာအနိမ့်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ယခင်သုတေသနအောက်ပိုင်း prepulse တားစီး (။ Bubser နှင့်ကော့ချ်, 1992; Ralph et al, 1994; ။ Swerdlow et al, 1999; ။ ။ Schwarzkopf et al, 2006 ဒိုဟာဆီ et al, 2007) DA ဂီယာမြှင့်တင်ရန်ကြောင်း psychostimulants နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး အခြားသူတွေ dopamine receptors ၏ pharmacological တားစီး prepulse တားစီးပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ကြ (Schwarzkopf et al, 1993; ။ Depoortere et al, 1997 ။ ) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, DD ကြွက်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်ကျော် prepulse တားစီးအတွက်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိသိသာသာတိုးလာပါသည်။ ယခင်လေ့လာမှုများကိုလည်း DA receptors ၏ pharmacological တားစီးသည့် acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုသရုပ်ပြခဲ့ကြ (Davis ကနှင့် Aghajanian, 1976; Schwarzkopf et al, 1993 ။ ) ။ Dopamine-ကုန်ခမ်း DD ကြွက်သိသိသာသာပြောင်းလဲ acoustic ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်မဟုတ်ဘဲ, သို့သော်ယခင်အစီရင်ခံစာများ (Schwarzkopf et al ။ , 1993) နဲ့ကိုက်ညီအထူးသဖြင့်အမြင့်ဆုံးစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပြင်းထန်မှာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလျှော့ချတုံ့ပြန်မှုကိုဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်း, ရှိခဲ့သည်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါဒေတာ DD ကြွက်ယခင်ကချက်ချင်းပြီးနောက် L-Dopa ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့စမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွင်းမှာ DA မလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ DA cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်၏ပြန်လည်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်စကားရပ်များအတွက်အရေးမပါကြောင်းကိုသရုပ်ပြ လေ့ကျင့်ရေး။ DD ကြွက်တွေအားလုံးလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများကာလအတွင်း dopamine-ကုန်ခမ်းသောကြောင့်ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ချက်, DA လေ့ကျင့်ရေးကာလအတွင်းကနဦးလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်လိုအပ်သောခံဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ DD ကြွက်ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကိုဖော်ပြပါဘူး, နဲ့ L-Dopa ချက်ချင်းပေးထားပေမယ့်နာရီ 1 မဟုတ်, ပြီးနောက်အခါရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သာမြင်ကြသည်ကို ထောက်. DA မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စ၏အစောပိုင်းတည်ငြိမ်များအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းအကြံပြု လေ့ကျင့်ရေး။ ယူဆရ, သင်တန်းပေးခြင်းကြောင့်ရေရှည်ပုံစံဝင်ခွင့်ပြု, အမှတျဉာဏျသဲလွန်စတည်ငြိမ်ချက်ချင်းပြီးနောက် L-Dopa နှင့်အတူ DD ကြွက်ထိုးသွင်း။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုကွောကျမကျမှတ်ဉာဏ်၏ထိုကဲ့သို့သောတည်ငြိမ် (Abercrombie et al ဘို့ခွင့်ပြုမယ်လို့ကွောကျမကျအေးစက်များအတွက်အလွန်အရေးပါသည်ဦးနှောက်ဒေသများအတွင်း DA အဆင့်ဆင့်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာမြင့်တက်စေ 1989; ။ Kalivas နှင့် Duffy, 1995; ဒိုဟာဆီနှင့် Gratton, 1997; Inglis နှင့် Moghaddam, 1999) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီ, အခြားသူများ DA function ကို၏ Post-လေ့ကျင့်ရေးထိန်းသိမ်းရေးကိုကွောကျရှံ့-related မှတ်ဉာဏ် (; Lalumiere et al, 2003; ။ LaLumiere et al, 2004 ။ Bernaerts နှင့် Tirelli, 2005) ပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်မျိုးစုံ DA အဲဒီ receptor Subtype ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ D1R KO ကြွက် cue-မှီခိုကွောကျရှံ့သောသင်ယူမှုအတွက် DA ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေ၌ဤအဲဒီ receptor မျိုးကွဲများအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အဘို့ရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ကင်းမဲ့နေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေတွင်-မှီခိုကွောကျရှံ့သောသင်ယူမှု D1R KO ကြွက်တွေမှာနဂိုအတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ (; Guarraci et al, 1 ။ , 1 Lamont နှင့် Kokkinidis) ဤဒေတာ D1998R တူသောရန်ထိတ်လန့်ာင်းထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲသင်ယူခြင်း cue-အေးစက်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် attenuate, အဲဒီစမ်းသပ်ချက်အတွက် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် D1999R မှတိကျတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကတခြားလေ့လာမှုတွေ corroborate ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအခြား cue-မှီခိုသင်ယူမှု Paradigm အတွက် D1R များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍသရုပ်ပြလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းများမှာ (Smith က et al, 1998; ။ Eyny နှင့် Horvitz, 2003) ။
D2R KO နဂိုအတိုင်းကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်ခဲ့သေးစျေးမှာာင်းမရှိခဲ့ပေ။ Greba et al ။ (2001) D2R ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdalar ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအခြေခံထိတ်လန့်သို့မဟုတ် footshock မှတုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲစျေးမှာထိခိုက်စေကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်တစ်ခုချို့ယွင်းမှဦးဆောင်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ D2R ၏ activation (Bissiere et al ။ , 2003) ယူဆရကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးပါသောအပါလိမ့်မယ်အရာ, အ BLA အတွက်ရေရှည်အလားအလာသော induction စေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ D2R သင်ယူခြင်း cue-မှီခိုကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အမလိုအပ်ပါဘူးဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်ဘဲဒီ DA အဲဒီ receptor မျိုးကွဲအခြေအနေတွင်-မှီခိုစျေးမှာာင်းအရေးကြီးသောကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ လေ့ကျင့်ရေးကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်တားဆီးရှေ့တော်၌ထို D2 တူသောရန် eticlopride နှင့်အတူစနစ်တကျ D2R KO ကြွက်ထိုးသွင်း; ။ တို့က, လည်း eticlopride အားဖြင့် inhibited နေကြသည်သောအခြား D2R ကဲ့သို့ receptors, ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့် (Sigala et al အတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်း 1997 ဖြစ်နိုင်ခြေကဖြစ်၏ Bernaerts နှင့် Tirelli, 2003; Laviolette et al, 2005; ။ Swant နှင့် Wagner , 2006) ။ ထို့ကြောင့်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက် D2 တူသောရန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ cue-မှီခိုသင်ယူမှုအတွက်ချို့ယွင်းသည့် D2R မိသားစုအခြားအဖွဲ့ဝင်များဟန့်တားသည်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမှစွပ်စွဲနိုင်ပါသည်။
အထူး ventral tegmental ဧရိယာမှ endogenous TH ၏ရွေးချယ်ပွနျလညျထူထောငျ DD ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူတစ်ပွနျလညျထူထောငျဖို့ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ Immunohistochemistry TH ထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens နှင့် basolateral amygdala အဖြစ်အရေးကြီးသော limbic အရေးပါဖို့, ဒါပေမယ့်မ dorsal striatum ပြန်ခဲ့ညွှန်ပြ။ ထို့အပွငျ TH များအတွက်အပြုသဘောအနည်းငယ်အာရုံခံအဆိုပါ substantia nigra ပိုဒျ compacta အများတွင်ရှိခဲ့သညျ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron ထံမှ DA cued- နှင့်ဆက်စပ်-ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်များအတွက်အရေးကြီးသောကြောင်းဖော်ပြသည်။
အဆိုပါ basolateral amygdala မှ DA ၏ရွေးချယ်ပွနျလညျထူထောငျနှင့်အတူကြွက်တွေရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့မဟုတ်စျေးမှာာင်းရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပေမယ့်မပေး။ ယခင်လေ့လာမှုများ DA GABAergic inhibitory သေံမြားတှငျပွောငျးလဲမှတဆင့် amygdala function ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်သည့် D1R ဒါမှမဟုတ် D2R ဖြစ်စေကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပြသကြပါပြီ (Bissiere et al, 2003; ။ Kroner et al, 2005; ။ Marowsky et al, 2005 ။ ) ။ ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါဒေတာ basolateral amygdala အတွက် DA ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အဘို့ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏ဝယ်ယူဘို့အရေးပါဖြစ်ပါသည်, သေးမှတ်ဉာဏ်၏ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်လုံလောက်သောမဟုတ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ရေတိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ventral tegmental ဧရိယာကနေထွက်ရှိတဲ့ basolateral amygdala-ထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကိုကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ventral tegmental ဧရိယာ-ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ DD ကြွက်တွေမှာ endogenous TH ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပွနျလညျထူထောငျနဂိုအတိုင်းရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်မှဦးဆောင်; ထို့ကြောင့်အခြား mesocorticolimbic ဆားကစ်မှ TH ၏ပွနျလညျထူထောငျဖွယ်ရှိကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်များအတွက်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်တည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ။ မာဖီ et al, 1995;; Pezze et al, 2000; ။ LaLumiere et al, 2003; ။ Laviolette et ယခင်လေ့လာမှုများနျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex ကိုလည်းကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း DA ၏အရေးကြီးသောပစ်မှတ် (Kalivas နှင့် Duffy, 2005 ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု အယ်လ်, 2005; ။ Floresco နှင့်စီ, 2007) ။ သို့အတွက်ကြောင့်နျူကလိယ accumbens သို့မဟုတ် prefrontal cortex ဖြစ်စေများတွင် DA အချက်ပြရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလိုအပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု DA ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်တစ်ဦး cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက် task အတွက်လိုအပ်ကြောင်းသရုပ်ပြရှင်းလင်းဖို့မျိုးရိုးဗီဇ mouse ကိုမော်ဒယ်ပေါင်းစပ်, ဆေးဝါးဗေဒနှင့် function ကို၏ဒေသ-တိကျတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအသုံးပြုသွားမည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြင်ပကဒီ neurotransmitter များအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအလေးပေး။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု DA cue-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အဘို့အမျိုးစုံဦးနှောက်ဒေသများတွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းမျိုးစုံ DA receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးလိုအပ်ဖော်ပြသည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ ventral tegmental ဧရိယာ DA အာရုံခံတည်နေရာ (Ford ကား et al ပစ်မှတ်ထားအဆိုအရ၎င်းတို့၏မော်လီကျူးများနှင့်ဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများအတွက်သိသိသာသာကွဲပြားကြောင်းထင်ရှားပြီ, 2006; ။ Margolis et al, 2006; ။ Bjorklund နှင့် Dunnett, 2007; Lammel et al, 2008 ။ Margolis et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ Th ဗီဇရွေးချယ်သည့် basolateral amygdala မှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံအတွက်ပြန်လည်သက်ဝင်ခဲ့သောငါတို့ဖျော်ဖြေအဆိုပါစမ်းသပ်ချက်ကိုသူတို့အစားအခြားအဦးနှောက်ဒေသများမှထုတ်လုပ်တဲ့ DA အာရုံခံ၏ကိစ္စအတွက်ထက် ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron ၏သေးငယ်တဲ့, select လုပ်ပါလူဦးရေဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်။ DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောသရုပ်ပြလေ့လာမှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ, အဲဒီ discrete DA ဆားကစ်၏တစ်ဦးချင်းစီ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုအလေးပေး။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်-related သင်ယူမှုထည့်သွင်းရန် DA ၏များစွာသောအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မလုပ်ငန်းဆောင်တာများအသိပညာတိုးချဲ့ထိုကဲ့သို့သော Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ, obsessive-compulsive ရောဂါ, နှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါအဖြစ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်-related မမှန်၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ဤသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု, အထွေထွေဆေးပညာသိပ္ပံနှင့်အထွေထွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ '' Grant က 32 R07270 GM က 4-25 ၏ NIH အမျိုးသား Institutes အမျိုးသားအင်စတီကျုကနေအမျိုးသားသုတေသနဝန်ဆောင်မှု Award ဆု T058501 GM05 ကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ mouse ကိုကိုလိုနီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ်အပေါ်အကူအညီတောင်းအဲလ်ဘတ်ကင်တားနား, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်အထောက်အကူဖြစ်စေမှတ်ချက်များများအတွက် Ilene Bernstein, Lisa ကို Beutler, ချားလ်စ် Chavkin နှင့်လာရီ Zweifel ကျေးဇူးတင်နှင့် Valerie အမှတ်တရ။ ငါတို့သည်လည်း AAV2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအတွက်စဉ်အတွင်း CAV1 နဲ့မဿဲဒေါက်တာ Miguel Chillon (ဘာစီလိုနာ၏Universität Autonoma မှာ CBATEG ၏ Vector ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1 ။ Abercrombie ED, Keefe Ka, DiFrischia DS, Zigmond MJ ။ အတွက် Vivo striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်, နျူကလိယ accumbens နှင့်တိုကျရိုကျ cortex medial အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Differential ။ J ကို Neurochem ။ 1989; 52: 1655-1658 ။ [PubMed]
2 ။ Bernaerts P ကိုတစ်ဦး inhibitory ရှောင်ရှားခြင်း၏မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးအပေါ် dopamine D4 အဲဒီ receptor agonist PD168,077 ၏ Tirelli အီး Facilitatory အကျိုးသက်ရောက်မှု C57BL / 6J ကြွက်တွေအတွက်တုန့်ပြန်သိခဲ့ရတယ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2003; 142: 41-52 ။ [PubMed]
3 ။ Bissiere S က, Humeau Y ကို, feedforward တားစီးနှိပ်ကွပ်ခြင်းဖြင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် amygdala အတွက် Luthi အေ Dopamine တံခါးတို့ LTP သော induction ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 587-592 ။ [PubMed]
4 ။ Bjorklund တစ်ဦးက, Dunnett SB ။ ဦးနှောက်အတွက် Dopamine အာရုံခံဆဲလျစနစ်များ: update တစ်ခု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 194-202 ။ [PubMed]
5 ။ Bubser M က, ကြွက်များ၏ acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်၏ Koch အမ် Prepulse တားစီးသည့် medial prefrontal cortex ၏ 6-hydroxydopamine ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 1994; 113: 487-492 ။ [PubMed]
6 ။ Davis က M ကို, Aghajanian GK ။ ကြွက်များတွင် acoustic ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်ပေါ် apomorphine နှင့် haloperidol ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl) 1976; 47: 217-223 ။ [PubMed]
7 ။ de Oliveira AR, Reimer AE, Brandao ML ။ conditional ကြောက်စိတ်ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက် Dopamine D2 အဲဒီ receptor ယန္တရားများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2006; 84: 102-111 ။ [PubMed]
8 ။ Depoortere R ကို, Perrault, G, ဆန်းဂါးဆို DJ သမား။ antipsychotic လှုပ်ရှားမှုဖော်ထုတ်မယ်များအတွက်မော်ဒယ်အဖြစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ pharmacological အကဲဖြတ်: ကြွက်အတွက်ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု၏ prepulse တားစီး၏အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 1997; 132: 366-374 ။ [PubMed]
9 ။ ဒိုဟာဆီ JM, Masten VL, ဝဲလ် SB, Ralph RJ, Klamer: D, အနိမျ့ MJ, Geyer MA ။ ကြွက်တွေအတွက် Prepulse တားစီးပေါ်ကင်းများပြတ်တောက်သက်ရောက်မှုမှ Dopamine D1, D2 နှင့် D3 receptor Subtype ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 12: 12 ။
10 ။ ဒိုဟာဆီ MD, နျူကလိယ accumbens အတွက် Gratton အေ NMDA receptors နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် modulate ။ synapses ။ 1997; 26: 225-234 ။ [PubMed]
11 ။ Drago J ကို, Gerfen CR, Lachowicz je, Steiner H ကို, Hollon TR, မတ်ေတာသ PE, et al Ooi GT ကို, Grinberg တစ်ဦးက, Lee က EJ, Huang က SP ။ D1A dopamine receptors ချို့တဲ့တဲ့ Mutant mouse ကိုခုနှစ်တွင်ပြောင်းလဲ striatal function ကို။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1994; 91: 12564-12568 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ Eyny YS, Horvitz JC ။ အစာစားချင်စိတ်အေးစက်အတွက် D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍဆန့်ကျင်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 1584-1587 ။ [PubMed]
13 ။ Floresco SB, စီ MT ။ အဆိုပါ basolateral amygdala-prefrontal cortical လမ်းကြောင်းအတွက် inhibitory နှင့် excitatory ဂီယာ၏ Dopaminergic စည်းမျဉ်း။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 2045-2057 ။ [PubMed]
14 ။ Ford ကားက CP, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Williams က JT ။ Properties ကိုနှင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ opioid တားစီးပစ်မှတ်တည်နေရာအရသိရသည်ခြားနားသည်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 2788-2797 ။ [PubMed]
15 ။ Greba မေး, Kokkinidis အယ်လ် Peripheral နှင့် dopamine ၏ intraamygdalar အုပ်ချုပ်ရေး D1 အဲဒီ receptor ရန် SCH 23390 လုပ်ကွက်ထိတ်လန့်-potentiated ကိုကွောကျရှံ့ပေမယ် reactivity ကိုသို့မဟုတ်အသံထိတ်လန့်များ၏စျေးမှာာင်းရှော့ခ်မဟုတ်ပါဘူး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 262-272 ။ [PubMed]
16 ။ Greba မေး, Munro LJ, Kokkinidis အယ်လ်ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်နှင့်အတူတိုင်းတာအဖြစ်ဂန္ထဝင်အေးစက်ကွောကျရှံ့သောစကားရပ်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ cholinergic muscarinic receptors များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 870: 135-141 ။ [PubMed]
17 ။ Greba မေး, Gifkins တစ်ဦးက, amygdaloid dopamine D2 receptors ၏ Kokkinidis အယ်လ်တားစီးကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်နှင့်အတူတိုင်းတာစိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှုချို့ယွင်း။ ဦးနှောက် Res ။ 2001; 899: 218-226 ။ [PubMed]
18 ။ Guarraci အက်ဖ်အေ, Kapp BS ။ အဆိုပါနိုးယုန်အတွက် differential ကို pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်နေစဉ်အတွင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic အာရုံခံတစ်ခု electrophysiological စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1999; 99: 169-179 ။ [PubMed]
19 ။ Guarraci အက်ဖ်အေ, Frohardt RJ, Kapp BS ။ Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် Amygdaloid D1 dopamine အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1999; 827: 28-40 ။ [PubMed]
20 ။ Guarraci အက်ဖ်အေ, Frohardt RJ, ရေတံခွန် WA, Kapp BS ။ Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အပေါ်တစ်ဦး D2 dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdaloid တာဟာ၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2000; 114: 647-651 ။ [PubMed]
21 ။ Hnasko TS, ဖာရအက်ဖ်အေ, Scouras အေဒီ, Stoll EA ၏, Gale SD, Luquet S က, Phillips က PE, Kremer EJ, Palmiter RD ။ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာ nigrostriatal dopamine ၏ Cre recombinase-mediated ပွနျလညျထူထောငျ hypophagia နှင့် bradykinesia နောက်ကြောင်းပြန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 8858-8863 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ Horvitz JC ။ အဓိကမဟုတ်တဲ့ဆုလာဘ်ဖြစ်ရပ်များမှ Mesolimbocortical နှင့် nigrostriatal dopamine တုံ့ပြန်မှု။ neuroscience ။ 2000; 96: 651-656 ။ [PubMed]
23 ။ Inglis FM ရေ, အ amygdala ၏ Moghaddam ခ Dopaminergic innervation စိတ်ဖိစီးမှုမှအလွန်အမင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Neurochem ။ 1999; 72: 1088-1094 ။ [PubMed]
24 ။ Inoue T က, Izumi T က, ဂွေ ​​Y ကို, Muraki ငါ conditional ကြောက်စိတ်ဝယ်ယူအပေါ် dopamine: D (1 / 5) ရန် SCH 23390 ၏ Koyama တီ Effect ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 66: 573-578 ။ [PubMed]
25 ။ ယောရှုသည် M က, Adler တစ်ဦးက, Mitelman R ကို, Vaadia အီး, Bergman အိပ်ချ် Midbrain dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့် striatal cholinergic interneurons ဆုလာဘ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဂန္ထဝင်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောယုဂ်မှာဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များအကြားခြားနားချက်ဝှက်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 11673-11684 ။ [PubMed]
26 ။ Kalivas PW, စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုအတွက် dopamine ဂီယာ၏ Duffy P. ရွေးချယ် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 675: 325-328 ။ [PubMed]
27 ။ ကယ်လီ MA, Rubinstein M က, အာသနန်းစံ SL, Zhang က, G, Saez ကို C, Bunzow JR, Allen က RG, Hnasko R ကိုဘင်-ယောနသန် N ကို, ယူဆပါတယ် DK, အနိမျ့ MJ ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာ Pituitary lactotroph hyperplasia နှင့်နာတာရှည် hyperprolactinemia ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1997; 19: 103-113 ။ [PubMed]
28 ။ Koch အမ်ထိတ်လန့်ခြင်း၏ neurobiology ။ prog Neurobiol ။ 1999; 59: 107-128 ။ [PubMed]
29 ။ Kroner က S, Rosenkranz ဂျာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Barrionuevo G. အ Dopamine စသည်တို့အတွက် basolateral amygdala အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် modulates ။ J ကို Neurophysiol ။ 2005; 93: 1598-1610 ။ [PubMed]
30 ။ Lalumiere RT ကို, ငုယင် LT, McGaugh JL ။ noradrenergic နှင့် cholinergic စနစ်များပါဝင်ပတ်သက်မှု: dopamine ၏ intrabasolateral amygdala တာဟာ inhibitory ရှောင်ရှားခြင်းမှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီး modulate post-သင်တန်းပေး။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 20: 2804-2810 ။ [PubMed]
31 ။ LaLumiere RT ကို, Nawar EM, McGaugh JL ။ အဆိုပါ basolateral amygdala သို့မဟုတ်နျူကလိယအားဖြင့်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီး၏ Modulation shell ကိုနှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်ဒေသများတွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါ dopamine အဲဒီ receptor activation လိုအပ်ပါတယ် accumbens ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2005; 12: 296-301 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32 ။ Lammel S က, Hetzel တစ်ဦးက, Hackel အိုဂျုံးစ်ငါ Liss B ကတစ်ဦးကို dual mesocorticolimbic dopamine သည့်စနစ်အတွင်း mesoprefrontal အာရုံခံ၏ Roeper ဂျေထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 760-773 ။ [PubMed]
33 ။ Lamont EW, အ dopamine D1 အဲဒီ receptor ရန် SCH 23390 ၏ Kokkinidis အယ်လ်ပြုတ်ရည်ဟာ amygdala လုပ်ကွက်သို့ potentiated ထိတ်လန့်ပါရာဒိုင်းအတွက်စကားရပ်ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 795: 128-136 ။ [PubMed]
34 ။ Laviolette SR, Lipski WJ ရေ့ AA ကို။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex ဟာ dopamine D4 အဲဒီ receptor-မှီခို basolateral amygdala input ကိုကတဆင့်ပေါက်ကွဲပြီးနှင့်ကြိမ်နှုန်း codes တွေကိုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု encodes အတွက်အာရုံခံတစ် subpopulation ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 6066-6075 ။ [PubMed]
35 ။ သံပုရာ N ကို, Manahan-Vaughan ဃ Dopamine D1 / D5 တံခါးဝ hippocampal ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါမှတစ်ဆင့်ဝတ္ထုအချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူ receptors ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 7723-7729 ။ [PubMed]
36 ။ Maren အက်စ်အဆိုပါ amygdala, Synaptic plasticity ကြောက်မှတ်ဉာဏ်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003; 985: 106-113 ။ [PubMed]
37 ။ Maren S က, Quirk GJ ။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်၏အာရုံခံအချက်ပြ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004; 5: 844-852 ။ [PubMed]
38 ။ Margolis eb, Mitchell က JM, Ishikawa J ကို, Hjelmstad GO, Fields HL ။ Midbrain dopamine အာရုံခံ: အနာဂတ်ပစ်မှတ်အရေးယူအလားအလာကြာချိန်နှင့် dopamine: D (2) အဲဒီ receptor တားစီးဆုံးဖြတ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 8908-8913 ။ [PubMed]
39 ။ Margolis eb, Lock ကို H ကို, Chefer VI ကို, Shippenberg TS, Hjelmstad GO, Fields HL ။ Kappa opioids ရွေးချယ်သည့် prefrontal cortex မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံထိန်းချုပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 2938-2942 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40 ။ Marowsky တစ်ဦးက, Yanagawa Y ကို, Obata K သည်, Vogt Ke ။ interneurons ၏အထူးပြု subclass amygdala function ကို၏ dopaminergic ပံ့ပိုး mediates ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 48: 1025-1037 ။ [PubMed]
41 ။ McNish Ka, Gewirtz JC, အ hippocampus ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက် Contextual ကြောက်စိတ် Davis ကအမ်အထောက်အထား: တစ်ခဲ၏နှောင့်အယှက်ဘဲကြောက်ရွံ့ရိုသေ-potentiated ထိတ်လန့်။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 9353-9360 ။ [PubMed]
42 ။ Missale ကို C, Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber M က, caron MG ။ Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol ဗျာ 1998; 78: 189-225 ။ [PubMed]
43 ။ မာဖီ, CA, Pezze M က, Feldon J ကိုတစ်ဦးဆန္ဒရှိအေးစက်နှိုးဆွဖို့ငုပ်လျှိုးနေတားစီး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုနှင့်အမာခံအတွက် dopamine ၏ Heidbreder C. Differential ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ neuroscience ။ 2000; 97: 469-477 ။ [PubMed]
44 ။ Pezze MA, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက် Feldon ဂျေ Mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း။ prog Neurobiol ။ 2004; 74: 301-320 ။ [PubMed]
45 ။ Pezze MA, Bast T က, Conditions ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်များအတွက်ကြွက် medial prefrontal cortex အတွက် dopamine ဂီယာ၏ Feldon ဂျေသိသာထင်ရှားသော။ Cereb Cortex ။ 2003; 13: 371-380 ။ [PubMed]
46 ။ Ponnusamy R ကို, Nissim HA, D2 ကဲ့သို့ dopamine receptors ၏ Barad အမ်စနစ်ပိတ်ဆို့ကြွက်တွေမှာ conditional ကြောက်စိတ်မျိုးသုဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2005; 12: 399-406 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47 ။ Ralph RJ, Varty GB ကို, ကယ်လီ, MA, ဝမ် YM, caron MG, Rubinstein M က, ယူဆပါတယ် DK, အနိမျ့ MJ, Geyer MA ။ အဆိုပါ dopamine D2, ဒါပေမယ့်မရ D3 သို့မဟုတ် D4, အဲဒီ receptor မျိုးကွဲကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ် prepulse တားစီး၏ပြတ်တောက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 4627-4633 ။ [PubMed]
48 ။ Ralph-Williams က RJ, Lehmann-Masten V ကို, Otero-Corchon V ကို, အနိမျ့ MJ, Geyer MA ။ prepulse တားစီးအပေါ်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက် dopamine agonists ၏ differential သက်ရောက်မှု: တစ် D1 အတွက်လေ့လာမှုနဲ့ D2 အဲဒီ receptor ခေါက်ထွက်ကြွက်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 9604-9611 ။ [PubMed]
49 ။ သင်ယူသို့မဟုတ်နားမလည်ကိုကွောကျရှံ့: ထိတ်လန့်၏ရစ်ချတ်ဆန် R. Shock ာင်း? ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2000; 110: 109-117 ။ [PubMed]
50 ။ Risbrough vB, Geyer MA, Hauger RL, ကုန်ကျစရိတ်က S, Stenzel-ညံ့ဖျင်း M က, Wurst W က, Holsboer အက်ဖ် CRF (1) နှင့် CRF (2) receptor Contextual သော်လည်းမပြတ်တွေကိုမှအလားအလာရှိသည့်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်များအတွက်လိုအပ်သောနေကြသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 19: 19 ။
51 ။ Rosenkranz ဂျာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ pavlovian အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအနံ့-evoked amygdala အလားအလာများ Dopamine-mediated မော်ဂျူ။ သဘာဝ။ 2002; 417: 282-287 ။ [PubMed]
52 ။ Schultz ဒဗလျူ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူတရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 36: 241-263 ။ [PubMed]
53 ။ Schwarzkopf SB, Mitra T က, ဘရူနို JP ။ မွေးကင်းစကလေးအဖြစ် dopamine ၏ကုန်ခမ်းကြွက်များတွင်အာရုံခံ Gates: schizophrenic လူနာအတွက်တွေ့ရှိချက်ဖို့အလားအလာဆက်စပ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992; 31: 759-773 ။ [PubMed]
54 ။ Schwarzkopf SB, ဘရူနို JP, acoustic ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့် prepulse တားစီးပေါ် haloperidol နှင့် SCH 23390 ၏ Mitra တီအကျိုးသက်ရောက်မှု Basal အောက်မှာနှင့်အခြေအနေများနှိုးဆွ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1993; 17: 1023-1036 ။ [PubMed]
55 ။ Sigala S က, Missale ကို C, ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အပေါ် dopamine D2 နှင့် D3 receptors ၏ Spano P. အတိုက်အခံဆိုးကျိုးများ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1997; 336: 107-112 ။ [PubMed]
56 ။ Sigurdsson T က, Doyere V ကိုကာဣန CK, LeDoux je ။ အဆိုပါ amygdala အတွက်ရေရှည်အလားအလာ: ကွောကျရှံ့သောသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ဆယ်လူလာယန္တရား။ Neuropharmacology ။ 2007; 52: 215-227 ။ [PubMed]
57 ။ Smith က DR, Striplin CD ကို, Geller လေး, စာပို့သမား RB, Drago J ကို, Lawler က CP, D1A dopamine receptors ချို့တဲ့ကြွက်၏ Gallagher အမ်အပြုအမူအကဲဖြတ်။ neuroscience ။ 1998; 86: 135-146 ။ [PubMed]
58 ။ Swant J ကို, Wagner JJ ။ Dopamine Transporter ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဟာ D1 dopamine အဲဒီ receptor ၏ activation မှတဆင့်ကြွက် hippocampus ၏ CA3 ဒေသတွင်း၌ LTP တိုးပွားစေပါသည်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2006; 13: 161-167 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ Swerdlow ရော်ဘာ, shoemaker JM, Kuczenski R ကို, Bongiovanni MJ, Neary AC အ, Tochen LS, စိန့်မာရီ RL ။ ကြွက်များတွင် Forebrain D1 function ကိုနှင့် sensorimotor Gates: D1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ, တိုကျရိုကျကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့် dopamine denervation ။ neuroscience လက်တ။ 2006; 402: 40-45 ။ [PubMed]
60 ။ Szczypka က MS, Rainey MA, Kim က DS, Alaynick WA, Marck BT, Matsumoto လေး, Palmiter RD ။ dopamine-လစ်လပ်ကြွက်များတွင်အပြုအမူအစာကျွေး။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1999; 96: 12138-12143 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
61 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004; 5: 483- 494 ။ [PubMed]
62 ။ zhou QY, Palmiter RD ။ Dopamine-လစ်လပ်ကြွက်, ပြင်းထန်စွာ hypoactive adipsic ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, aphagic ။ cell ။ 1995; 83: 1197-1209 ။ [PubMed]
63 ။ Zweifel LS, Argilli အီး, Bonci တစ်ဦးက, Palmiter RD ။ plasticity နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက် dopamine အာရုံခံအတွက် NMDA receptors ၏အခန်းက္ပ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 486-496 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]